AirPods Pro wuxuu ku imaan karaa midabbo kala duwan | Wararka IPhone
AirPods Pro wuxuu ku imaan karaa midabbo kala duwan
Xanta ayaa sii kordheysa oo ku saabsan AirPods Pro soo socda oo aan arki karno dhammaadka sanadkan, xitaa waxaa jira warar xan ah oo sheegaya toddobaadkan soo socda. Dhageystayaasha Apple ee "wireless-ka dhabta ah" ee cusub ayaa la imaan kara astaamo cusub, sida joojinta buuqa, laakiin sidoo kale naqshad cusub iyo wax aan weydiisaneynay tan iyo jiilkii ugu horreeyay ee AirPods: midabyo cusub.
Sida laga soo xigtay wargayska 'Economic Daily News', oo ah mareegaha wararka ee Shiinaha, AirPod-yada cusub waxay ku imaan karaan wadar ahaan sideed midab, oo ay ku jiraan afarta aad ku aragto sawirka maqaalka la socda afarta midab ee iPhone 11 Pro: Dahab, Qalin, Goob Cawl iyo Cagaar Habeen ah.
Sideed midab guud ahaan waxay umuuqataa sharad qatar ah, tixgalinta tan iyo markii labilaabay kudhowaad laba sano kahor, kaliya waxaan kuheysanay cadaan. Si kastaba ha noqotee, haddii aan eegno waxa Apple ku sameeyay sameecadaha dhagaha lagu garaaco ee loo yaqaan 'Beats', waa suuragal in aanan gebi ahaanba meesha ka saari karin midkoodna. Intaa waxaa sii dheer, waa inaan ku darno faahfaahinta afarta midab ee aan soo sheegnay oo u dhigma midabada iPhone 11 Pro ee hadda jira, waxay noqon lahaayeen kuwo dhammaystiran., sida muraayadda dhabarka ee iPhone-ka, ugub sannadkan oo ay si fiican u heleen dadka isticmaala.
Midabadan cusub ka sokow, AirPods Pro waxaa ku jiri lahaa baajinta buuqa, iska caabbinta biyaha iyo dhididka, jirka macdanta ah iyo cod tayo sare leh marka loo eego AirPods hadda. Hababka dhawaaqa ee kala duwan ayaa sidoo kale la qiyaasayaa, oo ay ku jiraan hab "daahfurnaan" ah oo kuu oggolaanaysa inaad cabudhiso joojinta buuqa oo aad dhegeysato buuqa deegaanka. Qiimo ku dhow $ 259, AirPods Pro-kan ayaa noqon doona $ 60 ka qaalisan AirPods 2 oo leh kiis lacag la'aan ah ($ 199). Isbedelka Spain waxay gaari karaan € 289-299, € 60-70 oo ka qaalisan AirPdos 2 oo ay kujirto wireless wireless. Markuu Muhiimadda bisha Oktoobar u muuqato mid gebi ahaanba la tuuray, kuwan cusub ee AirPods Pro waxay ku imaan karaan war-saxaafadeed fudud, wax run ahaantii layaab leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » AirPods Pro wuxuu ku imaan karaa midabbo kala duwan
Cusbooneysii iPhone 5-kaaga ka hor inta uusan shaqada ka joojin bisha Noofambar 3
Apple wuxuu iftiiminayaa asturnaanta iPhone-ka barta cusub